Ihe omume obodo Archives »Mahadum Hodges
Category: Ihe omume obodo
Pụrụ Inye Aka! Ajọ Ifufe Dorian Mkpokọta maka Bahamas
Prislọ ọrụ Stilwell na Mahadum Hodges sonyere maka enyemaka enyemaka Bahamas Hurricane Dorian bibiri ndị Bahamas, ndị bi ebe ahụ chọkwara enyemaka nke ukwuu. Mahadum Hodges nke Fort Myers na Naples campuses bụ saịtị ndọpụ maka Mgbalị Enyemaka Bahamas. A ga-eburu ihe anyị na-anakọta na Bahamas, site n'ikike nke Stilwell Enterprises. Hodges [...]	GỤKWUO
Ndị ọrụ Mahadum Hodges Nye Inye Ihe 500mụaka XNUMX maka Tomụaka maka Tots
Ndị ọrụ Mahadum Hodges na-enye ihe karịrị ihe egwuregwu 500 na ihe egwuregwu ụmụaka maka obere afọ Kwa afọ, ndị ọrụ Mahadum Hodges na-eme ezumike ahụ site n’inye ụmụaka. N'afọ a, ha meghere obi ha ma nyefee ihe karịrị ụmụaka 500 ụmụaka egwuri egwu maka ụmụaka. Dr. John Meyer, onye isi ala, kwuru, sị, "Mmesapụ aka nke ngalaba na ndị ọrụ anyị niile bụ ihe na-enye obi ụtọ. [...]	GỤKWUO